Ogige Ala Na - adịghị - Ọgwụ Vortex - Waynesville NC
Ike Energy - Ngwongwo ala di iche iche
Home » Ndepụta » Ike Energy - Ngwongwo ala di iche iche
Sq Na: 8015
Ike Ike - N'ezie, ọ bụ ugwu ugwu pụrụ iche!
Ebe dị otú ahụ dị ike ebe echiche na-ekpochapụ ma na-emepụta ihe. Enweghị ókè, ebe nsọ ebe ume ume nke ụwa na-aga n'ihu, na-achọ mgbanwe. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, na mmiri mmiri doro anya nke ọma na-asọfe site na ọtụtụ nnukwu ego quartz nchịkọta gburugburu nke a ugwu ugwu pụrụ iche, ndị na-echebara nlezianya egosipụta mmetụta nke udo na ọma na nleta.
Site na ntinye a na-agba ọsọ, ụgbọala na-acha uhie uhie na-agagharị na redio rhododendron na laurel nke ugwu, ebe ndị gara aga na ebe ịta nri, na otu n'ime ọdọ mmiri abụọ. Agatụghị ewere ya, ala a na-achọ ka uche gị dị. Ụgbọaka site na ya dị ịtụnanya, na-ebubata na mkpochapu ebe mansion nyere iwu ruo mgbe ebighi ebi.
N'elu elu 3000, nnukwu ebe 8000 (+), ebe obibi 7-bedroom, 7 (+), bụ ebe nchekwa nke 23-acre, ebe obibi nke ugwu pụrụ iche.
N'ihe zuru ụwa ọnụ, ihe onwunwe a bụbu onye nwere uche, onye edemede na onye na-asụ asụsụ Greta Woodrew. Ọ bụ ụzọ mgbapụ onwe onye maka onye isi oche gara aga, na ụlọ ọrụ na-agbagha maka ndị guzobere Space Technology na Research Foundation (STAR). O meela ka ọtụtụ ndị ọbịa a ma ama na gburugburu ụwa jikọọ ọnụ. E nwere ọtụtụ atụmatụ ndụ na-eme ka nke a bụrụ ohere dị mma na pụrụ iche. Na nso nso a na 2013, e gosipụtara ihe onwunwe na National Geographic Channel dịka Paradaịs Preppers. Ọ bụ ugbu a bụ ebe obibi nke onwe, ezinụlọ.
Na enweghị mgbakọ na mkpochi na ọtụtụ ebe obibi, enwere ohere mgbasawanye na-akparaghị ókè. Mpaghara ugwu a dị iche iche dị obere karịa 3 nkeji si na 20 pụọ na I-40. Nke a bụ otu ụzọ ahụ dị ka nke a ga - ewe iji banye n'Ugwu National Smoky Mountains National Park. Obere ngwa 15 nke obere na-eduga gị n'ugwu dị elu nke Waynesville, ọ bụghịkwa 30 nkeji si Asheville. Ógbè ahụ na-enye ọtụtụ ihe omume omenala, ibi ndụ ihe nkiri, na egwu egwu na oge ezumike anọ, gụnyere skiing na Cataloochee, ụgbọ mmiri, ịkụ azụ, na golf. Ma nnukwu ugbo National National Park Smoky na ebe ntụrụndụ nile dị na Cherokee Resort na Casino nọ n'ime obere ụgbọala.
Ebere maka ndị na-ahọrọ nchekwa, nchekwa, ma dị mma, enwere ọdụ ụgbọelu 2, Charlotte (NC) na Atlanta (GA) n'ime ụgbọala 2-3, tinyere ọdụ ụgbọelu dị ala na Asheville, Greenville, na Knoxville. Gụnyere na nke a bụ nnukwu mkpịsị ugodi, nke nwere ike iji dị ka helipad.
Hụ Njegharị Na-agagharị
N'August nke 2016, ndị nwe ugbu a nwere ihe ịga nke ọma na ịmalite na imegharị vortex na-agwọ ọrịa - ike na-adịghị ka ọ bụla ọzọ.
Ebumnuche dị na Haywood County, naanị ógbè dị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Rockies ebe mmiri niile na-esite na mpaghara ala ma ọ dịghị mmiri si n'akụkụ ndị ọzọ.
Mmiri mmiri na-asọpụta site na nnukwu ike quartz nkwụnye ego gburugburu a Pụrụ Iche Ala ala.
Utu asaa na-ehi ura, tinyere umuaka ndi nlekota 5
Ngụkọta nke 7 jupụtara na 2 ọkara ọsa
Uzo dị ala bụ nke zuru ezu na Ụlọ ntụrụndụ, ebe a na-edebe ihe ọṅụṅụ na Stiva, na mmanya na-egbu mmanya, ụlọ ihe nkiri ahụ, Ụlọ Ahụhụ na 10-Sauna.
Eji osisi hardwood, slate, nkume na tile. Ebe ndị ọzọ na-anọ ọdụ na mpaghara nke anọ na-agba ọsọ n'ogologo ụlọ ahụ.
Usoro nchekwa na nyocha ọkụ na-adị na ebe ịntanetị na ohere ekwentị dị.
Ụzọ na-aga ije na ụzọ ụkwụ na-agafe ọhịa ma kpochapụ, ọkwa (ezigbo maka ebe obibi ndị ọzọ) na ala ugwu.
E nwere ọtụtụ ala ahịhịa juru na ahihia ndị nwere ogige ndị na-edozi, na ọdọ mmiri, ọdọ mmiri dị n'elu na ụrọ na obere ọdọ mmiri. A na-atụgharị na ndị gazebos n'ofe ala ahụ.
Ụlọ ihe ntanetị 1 1 / 2 a na-ejidebeghị, ebe nchekwa nchekwa ubi, na ebe ọtụtụ ekpuchi na-enye oge anọ na-atọ ụtọ.
Akwukwo ala a na-achota maka umu obere anu na ihe ubi na-eto eto
Onwe nke ọma, ya na nnukwu eletrik 5,000-gallon nyere ndị tank mmiri mmiri
Ebe nchekwa nchekwa ihe oriri siri ike, nke a na-agbanye n'ọkụ nke dị n'azụ ụgbọala.
Ụlọ ọrụ dị n'okpuru ala
Onu ogugu di iche iche nke mmanu dika umu tank tank 2 - 2,000 na 550 Gallon, egburu olulu mmiri na oku na oku oku
South n'ebe ọdịda anyanwụ ọdịda anyanwụ na-akwalite iji anyanwụ na-agafe agafe
Full ụlọ generator
Ngalaba nchekwa / ebe dị iche iche
Egwuregwu redio nke red na nnukwu eriri elu ugwu
Greenhouse na mkpụrụ osisi a na-amị mkpụrụ na - amịpụta osisi - pears, piich, mkpụrụ vaịn na mkpụrụ ọhịa ọhịa
Ọkwa ukwu nke isi na ụlọ na-egbuke egbuke na mgbidi dị ka oghere ụlọ
A na-etinye oven na grills na nkume
Gris na-eji aka na-akụ aka Greek
Kichin sara mbara nke nwere ọmarịcha, dị nro na-emetụ ndị na-emepụta ihe ndị dị na Brazil
Nnukwu osisi si n'ala na-esi na ụlọ ndị dị n'ime ụlọ na ebe ndị ọzọ na-ehi ụra maka ụtụtụ kọfị ma ọ bụ mmanya mmanya na-acha na mgbede mgbe ị na-ewere echiche ndị dị egwu
Enwere ụlọ obibi ụlọ zuru ezu
Ahịa: $ 1,333,333
Okwu: 1192 Rabbit Skin Rd.
Koodu mpaghara: 28785
Afọ Wuru: 1973
Ụkwụ Square: 8015
Ime ụlọ: 7
Ụlọ ịwụ ahụ: 7
Ọkara ime ụlọ ịwụ: 2
Ọdọ mmiri: Ogwuregwu Olimpik
mputa: Nkume Nkume
Heat / Cool: Mmanụ ma ọ bụ Propane, Steam Mmiri
Nke gara agaEbube - Ụlọ ụlọ maka ire ereIhe na-esoteEcho - Ugwu Green Modern
Esi na ahia nke ihe omuma - Interview na Brenda Thompson
Ebube - Ụlọ ụlọ maka ire ere